Uru nke ihe nchịkwa Master Scrum
1. Nweta isi ihe siri ike nke ozi Scrum
2. Gbanwee echiche gị
3. Ị ga-anọgide bụrụ ihe dị mma ma mara mma
4. Usoro nchịkwa Scrum Master bara uru maka mkpakọrịta gị
5. Na-emetụta mkpakọrịta gị iji nakweere usoro Agile
6. Soro ndị ọgbọ gị rụọ ọrụ nke ọma
7. Mee ka etiti gi ihe ọmụma Scrum nye ndi ọgbọ
8. Jikọọ na otu ndị ọkachamara nyocha
9. Na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ruru eru
10. Ihe nnọchianya nke nkwanye ùgwù
Oge iji ghọọ ọkà mmụta Scrum
Bụrụ Master Scrum
Scrum bụ usoro doro anya nke kwadoro ọrụ otu, mmekorịta na ọsọ ọsọ na-agabiga ihe omume dị mgbagwoju anya. Ọ na-enyere ndị dị iche iche aka ịchọta onwe ha ma gbanwee mmelite ngwa ngwa, dịka iwu ndị agile si dị.
Ọ bụ usoro a ma ama nke SMEs na ọtụtụ mba na-ejikarị eme ihe n'ụwa nile; otu dị ka Spotify, Microsoft na Ericsson niile na-eji Scrum. N'agbanyeghi ma ị bụ Scrum, ma ọ bụ na ị bụ ọkachamara agile, ebe a bụ uru 10 dị na Scrum Master:
Nweta isi ihe siri ike nke mmụta Scrum
Gbanwee àgwà gị
Ị ga-anọgide bụrụ ihe dị mma ma mara mma
Usoro nchịkwa Scrum Master bara uru maka mkpakọrịta gị
Na-emetụta mkpakọrịta gị iji nakweere usoro Agile
Soro ndị ọgbọ gị rụọ ọrụ nke ọma
Mee ka etiti gi ihe ọmụma Scrum nye ndi ọgbọ
Jikọọ na otu ndị ọkachamara nyocha
Na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ruru eru
Ihe nnọchianya nke nkwanye ùgwù
Nnyocha nke ihe karịrị usoro 5,400 IT gosiri na mmefu atụmatụ na-emekarị ka 45% na-enweta ugboro ugboro ma ọ bụrụ na ọrụ a wakporo. Site na ịghọ ọkachamara na Scrum, ị ga-anọpụ na mkpirisi ndị a ma welie okpueze nke ịrụcha ọrụ gị nke ọma na n'oge.
Enwere ike ịnweta ihe ọmụmụ Scrum Master na asambodo, ma maka ụfọdụ, uru ndị ahụ adịghị apụta ìhè ozugbo. Gụọ na ịchọta uru nke Usoro Scrum Master.
Na ohere nke na ị nwetabeghị Scrum, ịrụzu asambodo ahụ ga-egosi gị ikike ndị a na-atụ anya itinye ya n'ọrụ na nke ọma. Na ohere na mkpakọrịta gị amalitela iji mezuo usoro Scrum na ị nwere nghọta, ịrụ ọrụ Scrum Master ga-ewuli isi ihe ọmụma gị.
Scrum nwere ezigbo ahụmahụ? Ịrụzu ikikere Scrum Master ga-ejupụta ọ bụla oghere ị nwere ike ịnweta na ozi Scrum gị. A tụlere ihe niile, ị ga-echebara akụkụ ọ bụla nke Scrum echiche ka ị gafee ule nyocha.
Scrum bụ usoro agile na iji jiri ya na-arụ ọrụ, ị ga-enwerịrị echiche nke agile. Ihe kacha mkpa dị na njikwa onwe onye na-amị mkpụrụ na-amị mkpụrụ bụ otu nke nwere echiche dị mma.
Ịkwadebe na asambodo ga-emetụta àgwà a maka onwe gị na ndị mmekọ gị. Dị ka otu ìgwè, ị ga-enwe ikike iche echiche na ụzọ agile, na-eme ka mmegide dị iche iche dịkwuo mma, ịmekọrịta nkekọ dị mma na ọrụ ndị ọzọ na-amị mkpụrụ.
Asambodo bụ ụzọ magburu onwe ya iji kpọsaa onwe gị ma gosi ndị mmekọ na ndị nduzi na ị ghọtara otu ubi.
Usoro nchịkwa Scrum Master ga-emepe oghere ọrụ gị n'akụkụ mkpakọrịta ọ bụla nke na-eji arụ ọrụ arụ ọrụ. Ihe ndi ozo na egosiputa na i nwere ihu agile na omuma nke Agile, nke bara uru na ndi ozo ma obu ulo oru ndi ozo.
Ịkwado usoro ọzọ bụ nnukwu nhọrọ maka azụmahịa ọ bụla ebe ọ na-emetụta òtù dum: ndị mmadụ, usoro, ndị ahịa na njikwa.
Tinyere usoro ndị a, ọ dị mkpa maka ndị niile nwere oke aka na ị nwere ike ịrụ ezigbo uru na nnukwu uru ngwa ngwa. Site n'inweghi nchepu na ihe ndi ozo, ndi otu na-elekọta onwe ha, Scrum na-egbuke egbuke na nke a.
N'ọnọdụ ọ bụla, enweghi mmụta Scrum nwere ike ọ gaghị emepụta ihe ndị na-enye obi ụtọ na njikwa ga-aga n'ihu. Enweghị asambodo na ihe mmụta dị mkpa mụbara site na usoro ntinye aka, ị nwere ike ịchọta windo ahụ dị mkpa iji wepụ Scrum n'ime ala gị.
Nchịkwa ga-adịkwu mma itinye ihe onwunwe n'ime usoro Scrum ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-egosi na ha dị ugbu a n'etiti ha. Otu asambodo Scrum Master na-egosiputa njikwa na ị dị njikere actualize usoro Scrum.
Ihe nchoputa Scrum Master ga - enwe ihe bara uru ma chee na gi na ndi enyi gi na - aru ​​oru. Mee ka ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, ị ga-emepụta ma wusie okwu ndị dị otú ahụ na nghọta nke isi nke ihe na-emebi emebi na azụmahịa gị pụrụ iche.
N'agbanyeghi ma ị naghị ewere Scrum dịka ndị enyi gị, n'agbanyeghị ihe niile ị ga-erite. Onye ọ bụla Scrum nkuzi ga-agbanwe na ha ịke nke ịkụziri na ihe ị na-aghọta ga-adị iche. Ị nwere ike itinye uche na akụkụ dị iche iche nke Scrum.
N'ikpeazụ, ị ga-enwe ike ịmepụta nghọta gị maka ntụgharị ihe mgbagwoju anya nke Scrum na usoro agile.
Ihe njirimara nke Scrum Master na-egosi ndị ọgbọ gị na ị tinyela mgbalị ahụ, weere Scrum ma mụta itinye ya n'ọrụ gị.
Enweghị ezi ihe mere ị ga-eji nọrọ jụụ na-eme ka ndị enyi gị mara na ị maara ihe - gị nwere asambodo iji gosipụta ya.
Gbanwee n'ime Scrum Master na ị ga-esonyere otu ìgwè ndị ọkachamara Scrum na-elekwasị anya na mgbanwe nkwụsị na usoro agile.
Scrum.org na-eme ka ọkachamara na ndị ọkachamara Scrum zuru ụwa ọnụ. Nke a dị ike dị ka ọbá akwụkwọ nke ozi, ụzọ iji chọpụta oge na ebe hụrụ (ma nye) ntụziaka.
Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike inweta ọrụ, otu ndị kwadoro Scrum Masters bụ ụgwọ ọrụ dị egwu. Ndị ahịa gị nwere ike ịchọta atụmatụ nke otu nke nwere ike ịkwado ọnụ ma tinye Scrum n'ụzọ dị ike.
Asambodo bụ ihe nnọchianya nke nkwanye ùgwù nke a kwesiri ịdị na-eyi. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ị nọ na njikwa, ịchọta ndị nnochite anya gị kwadoro ma kwenye na-egosi ọrụ gị na ntụgharị ọrụ banyere ihe ha na-amụta. Ị ga-enwekwu ndị ọrụ nchịkọta mmụta ka ha jiri ngwa ngwa tinye ihe ọhụrụ ha.
Dika ihe na-ekwu, "na ohere ị na-eche ịchọta onye, ​​ịkwadebe ha na ịhapụ ha na-akwụ ụgwọ dị ukwuu, na-eme ka ha ghara ịkwado ha, na-akwadebe ha na ịhapụ ha."
aghọ a Onye ọrụ Scrum Master naanị na 2-ụbọchị na Ọganihu Technology Ngwọta ngwa ngwa. Ị ga-akwadebe na okpukpu abụọ ọsọ ahụ ma nọrọ ọdụ nyocha gị n'etiti nkwadebe - zuru okè maka ndị ọkachamara na ndị dị mkpa bụ mkpa Scrum ngwa ngwa.
Nkọwa n'etiti PRINCE2 vs. Scrum